Raharaha Maurice Tsiavonana Anaty fanadihadiana lalina sa nampanginina ?
Velon’ahiahy ny mpanara-baovao, mahakasika ny nahafaty an’i Maurice Rakotomalala mpanamory ny fiaran’ilay mpanao gazety mpamakafaka ara-politika, Maurice Tsiavonana.
Ity farany izay nindaosin’ny fahafatesana ihany koa raha heverina mbola hiatrika ny fitorian’ny fianakavian’ny lasibatra tao an-tokantranony. Misabaka eo amin’ny fampanginana tanteraka ny raharaha sy ny fiandrasana ny tohin’ny fanadihadiana ny mpandinika ny raharaham-pirenena sy ny tranga izay nahitana fahafatesana nifanesy. Araka ny loharanom-baovao marim-pototra iray, nahazo fahafahana vonjimaika mantsy ireo 9 voarohirohy tamin’ilay raharahan’ny mpamily. Ny mpitandro filaminana ihany koa raha nanontaniana izay heverina fa mifameno ny famotorana amin’ny lafiny polisy sy miaramilan’ny zandary dia nilaza fa ny ankilany avy no nandray an-tanana ny raharaha mahakasika ny fanadihadiana lalina. Mitoetra ho fanontaniana tsy ahitam-baliny ireo raharaha roa ireo noho izany.
Nifanelanelana 2 volana
Tsiahivina hatrany fa ny alin’ny 12 hifoha 13 mey 2018, sahabo tamin’ny 1 ora maraina no nisy nanafika ka maty voadaroky ny hazo misy fantsika tao ambany rihan’ny tranon’ilay mpilaza vaovao mpamakafaka politika ny mpamiliny, raha tany ambony rihana kosa ireo tompon-trano. Voalaza fa nisy fitaovana lasan’ireo jiolahy tamin’izany. Roa volana latsaka taty aoriana, ny 2 jolay, taorian’ny fampidirana hopitaly an’i Maurice Tsiavonana dia tsy tana koa ny ainy. Miandrandra ny fampitam-baovaon’ny fitsarana fatratra tahaka ireo mpitandro filaminana ny mpanara-baovao mba hanjakan’ny fangaraharana sy fanjakana tan-dalàna izay andrin’ny demokrasia.